အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအန္း:အခမဲ့မိုဘိုင်း Xxx ဂိမ္း
ကွိုဆိုတစ်ခုအလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်:သင်ဖူးလဲနှံ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအန္းငါဝမ်းမြောက်တင်ပြဖို့ကျွန်ုပ်တို့အစေးအဘို့အသင့်အဘယ်ကြောင့်နိမိတ်လက္ခဏာတက်ငျြး၊လျှင်မနှေးနဲ့အမြန်! သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကောင်းကနေပြောပြ၏နာမတော်ကိုဤအသိုင်းအဝိုင်း၊ကျွန်မတို့အားလုံးဟာအကြောင်းဆောင်ခဲ့သင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသောသီးသန့်အံဝင်ခွင်သို့မျက်နှာတွင်အန္းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ။ ပါကဒီဥပမာမှာ၊'အရွယ်ရောက်ပြီးရည်ညွှန်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ–အဖြစ်အတွက်၊သင်အဖြစ်သွားကစားကားဂိမ်းသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ။, ရဲ့လျှင်ပါပဲကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊ထို့နောက်ထွက်ရ၏dodge တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့–ဒါဟာစာသားအတိုင်းလုံးကျနော်တို့ဒီအပေါ်ပလက်ဖောင်း! အခြားလူတိုင်းအတွက်၊ငါယူမသွားတာပါအပေါ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အောက်တွင်ချအသေးစိတ်အဘယ်ကြောင့်သင်ရောက်ချင်တဲ့ပေလိမ့်မည်ပေါ်စူးစမ်းသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ လွတ်မြောက်ကြွက်ပြေးပြိုင်ပွဲကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေ၏အခြားနေရာများ:အသာအမည်ကိုသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်မှကြွလာသောအခါ XXX ဂိမ္း၏မိုဘိုင်းအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။, ဒီနေရာမှာ၊ကျွန်တော်ထွက်စာလုံးပေါင်းအတိအကျကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဒါကြောင့်သင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် litany၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း၊မြင့်မား-octane smutty ဂိမ်းကစား။ ႀကိဳးကိုယ်အတွက်ကြောင့်၊ဤသည်အသွားအဖြစ်အပျက်၏အကြိုက်ရာဖူးစေ့စပ်မီနှင့်အတူ!
လူမုန်းများအတွက်ပေးဆောင်မှုအရာ၊လက်ျာ? အထူးသဖြင့်သည့်အခါဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအရာရလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့! ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤအချက်ကို၊ကျွန်တော်သိချင်ကြကုန်အံ့သိသောလမ်းကိုရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကအခမဲ့ကစားရန်အသိုင်း:သင်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်တစ်ခုတည်းတစ်ပြားလျှင်သင်ချင်လာမှာ။ ထို့အပြင်၊ကျွန်တော်မအစီအစဉ်အဖြစ်အစေခံရန်အနိုင်ရမှပေးဆောင်ခရီး:လူတိုင်းတွင်တန်းတူတစ္ရပ္လုံးဒီနေရာမှာအဘယ်သူမျှမဖိအားများအတွက်သင်ပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုငွေသားရနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအခေါင်းစဉ်။, ကျွန်တော်တို့လေးမြတ်တန်ဖိုးထားကြောင်းလူအတော်များများအားဖြင့်သွားကြပြီ၊နာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအတွက်မကြာသေးမီချက်မှတ်ထားမှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဂိမ်းစီမံကိန်းများကိုရိုးရှင်းစွာအကြောင်းမခိုင်လုံသော။ ငရဲ၊ဒီမကပင်အဖို့သီးသန့်အရွယ်ရောက်အမျိုးအစား:ရုံမည်မျှမှာကြည့်ပါလိမ်ရှိပင်မစက်မှုလုပ်ငန်း! ထပ်မံ ၇၆၊အဘယ်သူမျှမရဲ့။။။အဆိုပါစာရင်းဝင်အပေါ်! ဒါကြောင့်လူအတော်များများကတိအခါကယ်နှုတ်ရန်ပျက်ကွက်။ ယခု၊အဘယ်အရာကိုကြီးမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းတို့ကအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်သင်တို့တစည်းလျှင်ကျနော်တို့ကမကယ်မနှုတ်၊ကိုယ်စာသားအတိုင်းဘာမှမ။, ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစနစ်ကျနော်တို့အရပ်ဌာန၌ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်နှင့်သေချာပးလ်က္ရွိေထုတ်ကုန်သင်အမှန်တကယ်ရှိသည်ချင်တယ်။ မင့်လိုလျှင်၊သင်အတွေ့အခြားတစ်နေရာရာကိုသွား!
အမျိုးမျိုးအမှန်တကယ်သည်အမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ငါသည်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြော ၄၈ ဂိမ်းကျနော်တို့လက်ရှိရရှိနိုင်ရှိသည်၊နှင့်အတူနောက်ထပ် ၂ beta(အဲဒီအတွက်ကစားနိုင်ပါတယ်ကန့်သတ်ပြင်ဆင်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကတိုက်ရိုက်မရုံ)။ ငါရဲ့စဉ်းစား၊ပြောဆိုရန်တရားမျှတသည်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အထိ ၅၀-ဂိမ်းအထိမ်းအမှတ်သောကြောင့်၊အချိန်အားဖြင့်သင်သည်ဤဖတ်၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့နှစ်ခုခေါင်းစဉ်ရှိပြီးသားပြန်လွှတ်ပေးခဲ့။ အို၊ငါစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့အဖြစ်မှန်အခြေအနေပဲရှိတာကကျွန်တော်တို့မှာ ၄ အဇင်ကြီးစွာသောဂိမ်းများ:အရာ ၁၀၀%သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။, သူတို့အဘို့အနှီးအယူအဆက:အရာအားလုံးရှာတွေ့ကဒီမှာတီထွင်ခဲ့သည်နှင့်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ မဝယ်ယူသို့မဟုတ်စေ့စပ်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်တတိယပါတီ၏ဂိမ်း၊အရာအများကြီးအသိုင်းအတွက်ဤအမျိုးအစားကိုအမှန်တကယ်ပြုပါ။ ပေးခြင်းကသင်သည်ဖြောင့်ပုံတူသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အင်း–ဒီမှာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့နှင့်နေမည်သောလမ်းအဆုံးအထိအချိန်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်ပေးပို့ဖို့အတွက်စစ်တပ်အပြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို–ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိမ့်မယ်ပါစေအခြားသူများထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX။ ထို့နောက်မှီ၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဂၢ!
ကတည်းကကျွန်မတို့ဟာအာရုံလုံးဝမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုထားတကယ်ကို့အတွက်အဘယ်အရာကိုအပေါ်တစ်ဦးကောင်းဂိမ်းကောင်း။ များစွာသောလူတို့အဘို့ထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊တစ်ခု၏အင်္ဂါညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ပေးခြင်းလူအဖို့လက်လှမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကြည့်သောထင်။ တဦးတည်းအနေလျှင်သင်၏ဤအမြင်အာရုံ purists ပဲသင်တို့အားယခုပြောပြပါ:အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအန္းအားလုံးအကြောင်းပါသောအကြည့်၊ကလေး! ၏တစ်ဝက်ခန့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေး ၃D စွယ်စုံကျမ်းပညာရှင်များနှင့်အနုပညာရှင်များ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ၊ဒါကြောင့်တပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံ–စတင်ထံမှပြီးမှ–နဲ့တူလှပါတယ်အ AAA ဂိမ္းကုမ္ပဏီကြီးနောက်ကွယ်မှ။, အဘယ်သူမျှမကုန်ကျစရိတ်ခဲ့သည်နှမြောပြီးမပြီးပျော့ပျောင်းအပေါ်ဒီကောင်ဖြစ်စေ:ကျနော်တို့ကဝယ်လိုအားအလွန်အကောင်းဆုံးနှင့်မငယ်တစုံတခုကိုမျှအဘို့အနည်ထိုင်။ သဘာဝကျကျ၊ဟကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊စတာပိုကောင်းအောင်နိုင်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွယ်စုံကျမ်းများအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်းရှိသည်တိကျတဲ့အစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီတစ်ဦးလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကိုအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြုမှ၊ဒါပေမယ့်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေသောအဆုံးသတ်ရလဒ်သည်အမှန်တကယ်မှော်အရာတစ်ခုခု။, ကျွန်တော်တို့မှာကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကျော်ကိုလာမယ့်နှစ်သေချာစေရန်ဤအချက်ကိုအခြားသောအရပ်တို့ထွက်ရှိပြီးတဲ့အတွက်ဂရပ်ဖစ်ဌာန၊အဘယ်သူမျှမပင်နီးကပ်။ ကိုယ့်တဦးတည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်မှာနမူနာခရီးပစ္စည်းမှာအပ်ပေးစေခြင်းငှါကောင်းတစ်စိတ်ကူးမယ့်အဘယျသို့အရှည်ကျနော်တို့သွားပြီ:ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းစိတ်ကူးကြည့်ရှု?
အဖြစ်အများကြီးပျော်မွေ့မယ်လို့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးစာရိုက်တနေ့လုံးဘယ်လောက်အံ့သြလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်ဟာ၊ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဖြစ်နိုင်များအတွက်အချိန်ဖုန်းဆက်ဖို့ငါ့ကိုအဖုံးအပေါ်တပြင်လုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင်ဖိတ်ခေါ်လာနှင့်ကိုယ်အဘို့ထဲကစစျဆေး။ ကိုသတိရပါ-အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်သည်တတ်နိုင်မည်သည့်အချိန်တွင်မှထွက်ခွာ။ အဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုအပ်ပါသည်နှင့်ကျနော်တို့ ၄၈ မှော်ဂိမ်းများများအနှံ့ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဂိမ်း-အခြေခံ။ ဒါဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့လာတဲ့အိပ်မက်၊ဒီတော့ထားများကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုလျှင်သင်နှင့်အတူသဘောတူကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အမှုအရာ။